Haweeney hooyadeed oo meyd ah 10 sano ku heysay qaboojiye - Ceeldheer News: Somalia News Update
Haweeney hooyadeed oo meyd ah 10 sano ku heysay qaboojiye
Booliska dalka Japan ayaa xabsiga u taxaabay haweeney u dhalatay isla dalkaas, kadib markii sida la sheegay ay sameysay arrin ka yaabisay dad badan.
Haweeneydan oo ay “hooyadeed dhimatay toban sano kahor” ayaa qaboojiyaha ama firinjeerka yaalay guri ay deganeyd waxay ku qarisay meydka hooyadeed.
Arrinkan ayaa markii dambe lagu wargeliyay booliska dalkaas.
Haweeneydan oo lagu magacaabo Yumi Yoshino waxay mudadaas oo dhan qaboojiyaha ku qarineysay meydka hooyadeed.
Qaar kamid ah warbaahinta dalkaas ayaa soo wariyay in Yumi oo ay da’deedu tahay 48 sano jir mar wax laga weydiiyay sababta intaas oo dhan ay meydka hooyadeed ugu heysay qaboojiyaha ayaa waxay sheegtay in sababta ay tahay “in aysan dooneyn inay hooyadeed ka tagto” halkii ay ku wada noolaayeen oo ah guri ku yaalla caasimadda dalkaas ee Tokyo.
Booliska dalkaas waxaa kale oo ay sheegeen in aysan jirin wax nabarra ah ama dhaawac ah oo ka muuqday jirka haweeneyda lagu xaseeyay qaboojiyaha.
Mas’uuliyiinta dalkaas ma aysan sheegin xilliga rasmiga ah ee ay dhimatay haweeneydaas iyo waxa sababay dhimashadeeda.
Yumi Yoshino oo intaas oo sano qarineysay meydka hooyadeed ayaa la oggaaday kadib markii qof kamid ah dadka nadaafadda qaabilsan uu arkay meydka haweeneyda dhimatay, waxayna xilligaas ka guureysay gurigii ay deganeyd kadib markii ay iska bixin weyday kirada.
Mas’uuliyiinta magaalada caasimadda ee Tokyo ayaa waxaa kale oo ay sheegeen in meydka haweeneydan araxda laga kala jebiyay si loo deeqsiiyo qiyaasta qaboojiyaha ama firinjeerka.
Ms Yoshino ayaa laga qabtay huteel ku yaalla magaalada Chiba ee duleedka caasimadda Tokyo, kadib markii la helay meydka.
Arrintan ayaa hadal badan ka dhallisay baraha bulshada ee dalka Japan, waxaana dad badan ay sheegeen in haweeneydaas ay ahayd qof ka samri waayay hooyadeed halka kuwa kalena ay sheegeen inay tahay “fal arxan darro ah”, maadaama ay araxda ka jebisay, taas na ay muujineyso sida aysan niyad wanaaga uga ahayn falka ay ku dhaqaaqday.
Xildhibaan Mahad Salaad “Fahmo la’aanta Farmaajo waxaa daliil u ah Maalin Jimca ah ayuu sheegay in uu hor tegayo Labada Aqal ee baarlamaanka”
Qaramada Modoobey oo farriin culus u dirtay madaxda dowladda iyo maamul gobaleedyada
Baarlamaanka Soomaaliya oo u codeeyay in lagu laabto heshiiskii 17-September
Farmaajo oo ku dhawaaqay in uu Ra’iisul Wasaare Rooble ku wareejiyay Doorashada iyo Amnigaa
TOOS:- Hadal jeedinta madaxweynaha ee golaha Shacabka
Faah-faahino ka soo baxaya dil ka dhacay Magaalada Muqdisho
Siyaasiyiin laga mamnuucay in ay u safraan dalka Faransiiska
Wararkii ugu dambeeyay kulanka golaha Shacabka oo goordhow furmi doono
Duqeyn cusub oo ka dhacday deegaano ka tirsan gobolka Bakool iyo faah faahin ka soo baxeysa
Ciidamada Hirshabeelle oo xiray dhalinyaro ka qeyb-gashay Shir Beeleed ka dhacay....
© 2020 Ceeldheer News | All rights reserved